ကံစမ်းမဲနှိုက်ပေးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုတွေများနေတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး ဘက်ကနေရပ်တည်ပြီး ပြောလာတဲ့ ဇေရဲထက် - TGI Daily News
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်လေးဖြစ်တဲ့ ဇေရဲထက်ကတော့ လတ်တလော ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ ဈေးရောင်းတဲ့ live ကိုကြည့်ရှု့အားပေးတဲ့ ထဲမှာလည်း တစ်ယောက်အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ငယ်လေကတည်းက အလွန်းအားပေးချစ်ခင်ခဲ့ရတဲ့ မင်းသမီးဖြစ်တာကြောင့် ယနေ့အချိန်ထိ ချစ်ခင်ရိုသေနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခုမှာတော့ ဇေရဲထက်က live ကနေ ကံစမ်းမဲ နှိုက်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်နေတာလေးတွေကို ထက်ထက်မိုးဦး ဘက်ကနေရပ်တည်ပြီး ပြောလာခဲ့ပါတယ်။
“ကံစမ်းမဲ့ပေါက်ချင်လို့ ဝယ်တာမဟုတ်သလို ထက်ကိုချစ်လို့အားပေးတာ i padဝယ်ချင် စိန်ဆိုတာ ဝယ်မနေဘူး……အလကားတချို့မလိုတမာတွေများ အာ့တာပဲကြည့် မလိုရှု့စိမ့်များ မုဒိတာမပွား ထက်ထက်ပဲအပြစ်ပြောခံရမှာပေါ့ သူတို့လုပ်ခိုင်းတော့လုပ်ရတာနေမှာ ငွေရှင်မျက်နှာတယ်ကြီးသကိုး အခုခေတ်မှာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ထက်ထက်ကိုချစ်လို့ အားပေးတာ ipad လိုချင်လို့အားပေးတာမဟုတ်ဘူးလေနော် …..ဖိုတ်တင်းပါထက်ထက် ….
ဝယ်သူတွေကိုမကောင်းရင်မရောင်းပေးပဲ သူကိုယ်တိုင်ဈေးလျော့ပြီး ဝယ်ယူသူကာစတမ်မာတွေကိုစေတနာ ထားပြီးရောင်းပေးတာကိုက သူ့ရဲစေတနာပါ….(မြေနိမ့်ရာ လှံစိုက် အားငယ်သူအားမပေး အရည်အချင်းရှိသူ ပုတ်ချ အာခေတ်ကုန်ပါတော့ ) လမ်းလယ်ခေါင်ကားပျက်ရင်း စိတ်တိုလိုရေးချလိုက်သည် ပေါပေါတောတောနဲ့ ပြီးစလွယ်လုပ်မပေးတာအသိသာ ” ဆိုပြီ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ ကဲ…ပရိသတ်ကြီးရေ မထက်ကို အားပေးစကားပြောပြီး အမြင်လေးတွေကိုလည်း ရေးပေးထားခဲ့ပေးပါဦးနော်…။
Photo Credit – Zay Ye Htet
ကံစမျးမဲနှိုကျပေးတာနဲ့ ပတျသကျပွီး ဝဖေနျမှုတှမြေားနတေဲ့ ထကျထကျမိုးဦး ဘကျကနရေပျတညျပွီး ပွောလာတဲ့ ဇရေဲထကျ
ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျောလေးဖွဈတဲ့ ဇရေဲထကျကတော့ လတျတလော ထကျထကျမိုးဦးရဲ့ စြေးရောငျးတဲ့ live ကိုကွညျ့ရှု့အားပေးတဲ့ ထဲမှာလညျး တဈယောကျအပါအဝငျပဲဖွဈပါတယျ။ သူငယျငယျလကေတညျးက အလှနျးအားပေးခဈြခငျခဲ့ရတဲ့ မငျးသမီးဖွဈတာကွောငျ့ ယနအေ့ခြိနျထိ ခဈြခငျရိုသနေတေဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။ ယခုမှာတော့ ဇရေဲထကျက live ကနေ ကံစမျးမဲ နှိုကျပေးတာနဲ့ပတျသကျပွီး ဝဖေနျနတောလေးတှကေို ထကျထကျမိုးဦး ဘကျကနရေပျတညျပွီး ပွောလာခဲ့ပါတယျ။
“ကံစမျးမဲ့ပေါကျခငျြလို့ ဝယျတာမဟုတျသလို ထကျကိုခဈြလို့အားပေးတာ i padဝယျခငျြ စိနျဆိုတာ ဝယျမနဘေူး……အလကားတခြို့မလိုတမာတှမြေား အာ့တာပဲကွညျ့ မလိုရှု့စိမျ့မြား မုဒိတာမပှား ထကျထကျပဲအပွဈပွောခံရမှာပေါ့ သူတို့လုပျခိုငျးတော့လုပျရတာနမှော ငှရှေငျမကျြနှာတယျကွီးသကိုး အခုခတျေမှာ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ထကျထကျကိုခဈြလို့ အားပေးတာ ipad လိုခငျြလို့အားပေးတာမဟုတျဘူးလနေျော …..ဖိုတျတငျးပါထကျထကျ ….
ဝယျသူတှကေိုမကောငျးရငျမရောငျးပေးပဲ သူကိုယျတိုငျစြေးလြော့ပွီး ဝယျယူသူကာစတမျမာတှကေိုစတေနာ ထားပွီးရောငျးပေးတာကိုက သူ့ရဲစတေနာပါ….(မွနေိမျ့ရာ လှံစိုကျ အားငယျသူအားမပေး အရညျအခငျြးရှိသူ ပုတျခြ အာခတျေကုနျပါတော့ ) လမျးလယျခေါငျကားပကျြရငျး စိတျတိုလိုရေးခလြိုကျသညျ ပေါပေါတောတောနဲ့ ပွီးစလှယျလုပျမပေးတာအသိသာ ” ဆိုပွီ သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာ ရေးသားဖျောပွလာခဲ့ပါတယျ။ ကဲ…ပရိသတျကွီးရေ မထကျကို အားပေးစကားပွောပွီး အမွငျလေးတှကေိုလညျး ရေးပေးထားခဲ့ပေးပါဦးနျော…။